Usizo lokuqala for ubuthi - kungcono Imininingwane kuhle ebalulekile, ngoba okungenani kanye empilweni, wonke umuntu uye wabhekana nesimo esifanayo. Ubuthi - akuyona into engavamile, futhi isizathu kungaba ukudla yekhwalithi ephansi, futhi ezinobuthi izinto, nosawoti, utshwala, njll Kuye ngezimpawu udinga ukuthatha izinyathelo ezithile.
Okokuqala ukuze basize ubuthi ukudla. Ngokuvamile, lezi ngobuthi zenzeka esikhathini ehlobo, lapho kuvela ngaso sonke isikhathi ukugcina imikhiqizo ezimweni ezifanele. Uma emzimbeni, ubuthi kubangele eziningi ukusabela - is ukuhlanza, ubuthakathaka, nesicanucanu esibi, noma isifo sohudo.
Uma umuntu bahlushwe nesicanucanu esibi, kuzomele ukuba baphuze amalitha okungenani isigamu sabantwana, yamanzi abilisiwe ahlanzekile cool ngesikhathi, bese uzama ukuvusa ukuhlanza.
Esimweni lapho isiguli, kunalokho, njalo izinyembezi, kunobungozi zokuntula amanzi emzimbeni. Kulokhu, isidingo ubuyise amasheya okusamanzi emzimbeni. Nge osenyameni eyingqabavu ubuhlanzo umuntu kufanele baphuze amalitha okungenani ezintathu uketshezi ngosuku. Udinga baphuze kaningi, kodwa kancane futhi sips ezincane, ukuze ngingasebenzisi kushiya iziqubu entsha ukuhlanza.
Uhudo wenza ukuthatha imithi ukuthi uqinise kwesitulo. Lokhu ayilungile, njengoba le ndoda, ukuze kuphela ukuvimbela imizimba yabo ubuthi ikhishwe. Kulokhu, usizo lokuqala uma ubuthi kuyehla kube reception carbon ocushiwe futhi isiphuzo bedlulele, njengoba kwenzeka sohudo ukuphelelwa amanzi emzimbeni.
Mushroom ubuthi: usizo lokuqala. Ezimweni Abaningana impela ezivamile futhi kubhekwe mushroom poisoning. ubuthi fungal ukungena emzimbeni, kokubili ukumuncwa isikhunta elimazayo, futhi nokulungiselela okungafanele kuqhathaniswa anobuthi. Izimpawu ngokuvamile siqhamuke nje futhi sinamandla besisu ubuhlungu nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo nokuhlanza.
Endabeni ka kokungenisa kwemikhiqizo enobuthi ikakhulukazi (isib toadstools okhanyayo) waphawula ukubukeka ukushukuma kwemizwa kanye khona e indle futhi igazi emetic uquqaba. Kulesi simo, kufanele ngokushesha shayela i-ambulense, ngoba kukhona ingozi yokufa.
Uma ushevu amakhowe womuntu kubalulekile ukuze uyiswe esibhedlela. Ngokwazi usizo lokuqala, bese ukuqala iphume esiswini. Isiguli kufanele baphuze amanzi amaningi noma ubisi bese kubangele ukuhlanza. Esimweni lapho ngemuva kwamahora ambalwa ushevu nesineke kwakusadingeka kungekho esihlalweni, kutuswa ukunikeza laxative omnene - kanjalo kubonisa ubuthi obuningi emzimbeni.
Kuyaphawuleka ukuthi ngo- mushroom izimpawu ubuthi awaveli ngokushesha, kodwa ngemva 16 - 24 amahora ngemva kwesidlo.
Usizo lokuqala for utshwala ubuthi. Utshwala ubuthi ubhekwa ayingozi kakhulu, kusukela ezinzima kakhulu ukudakwa nesineke angase awele kulokho okubizwa ngokuthi ikhoma oludakayo. Uma umuntu egula, kubalulekile ukuba iphume esiswini - ukuvumela isiphuzo isisulu 1 - 2 amalitha amanzi, ngemva kwalokho-ke kumele senze ukuhlanza. Uma isisulu ezazi, kufanele uthole wamphuzisa amaphilisi 15 amalahle isebenze.
Kuleso simo, uma isiguli aquleke, kufanele ngokushesha shayela i-ambulense. Usizo lokuqala for utshwala poisoning kuyehla kube nokuqapha womuntu. Okokuqala, kumelwe qiniseka Stow kanye nenhloko nganxanye ukuze ebuhlanzweni zinhlanga ngaphandle nobunzima, futhi akuzange kumenze kokuziklinya. Okwesibili, ngaphansi amponjwana imithambo yegazi uvuleke futhi iqala olunzulu nokushisa. Ngakho-ke, umuntu kudingeka ukufihle ukuvimbela hypothermia.
Kungakhathaliseki ukuthi iyini imbangela ubuthi, umuntu kudingeka ukuba aye kudokotela ngenxa kungenzeka imiphumela engahlosiwe.
Lapho udinga wamathumbu colonoscopy?
Enema ngaphambi kokubeletha
Ukuhambisa kusuka edolobheni ngomzana: amathiphu
Umbhishobhi omkhulu Kirill. biography
Amathuluzi ngogesi. okuyisilinganiso esiphansi semali edingekayo